जनता भन्छन्– ‘कुलमानलाई उर्जामन्त्री बनाउ/एमसीसीमा नजोडियोस्’ « Mero LifeStyle
जनता भन्छन्– ‘कुलमानलाई उर्जामन्त्री बनाउ/एमसीसीमा नजोडियोस्’
मेरो लाइफस्टाइल	||5August, 2021
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न निर्देशन गरेसँगै चर्चाको विषय बनेको छ । कुलमानको विषयलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्न थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मेरो लाइफस्टाइलले ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकमा कुुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न दिएको निर्देशन तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?’ सोधेको थियो । जसमा घिसिङलाई नियुक्त गर्नु राम्रो रहेको अधिकांशको विचार छ । कतिपयले घिसिङलाई नै उर्जामन्त्री बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् त केहीले एमसीसीसँग घिसिङलाई नजोडेमा राम्रो हुने धारणा राखेका छन् । पढनुहाेस् जनताको विचार जस्ताको तस्तै ।
एकातिर एकदम राम्रो अर्को तिर देउवाले कुलमानलाई एमसीसीको समितिमा भएका कारणले फोर्स गर्न सक्नुहुन्छ ।
एउटा कर्मचारीले आफ्नो सेवामा रहँदा जे–जतिकाम राम्रो गरे । अब उहाँ त्यहाँबाट पदावदी सकेर जानु भयो । उहाँलाई उर्जामन्त्री बनाउनुपर्छ । सोही पदमा ल्याउनु गलत हो ।
कुरा राम्रो हो तर कुलमानलाई भनेर एमसीसी पास गर्न पाइदैन ।
मेरो रोजाईमा पनि घिसिङजी नै हो । तर, शाक्यजीलाई कसरी पदमुक्त गर्ने ? के खोचे थाप्ने ? प्रश्न गहिरो र उत्तर त्यति सजिलो छैन ।
यदि देउवाले राम्रो गर्न चाहेको हो भने कुलमानलाई उर्जामन्त्री दिनु पर्थ्यो ।
कुरा राम्रो हो तर एमसीसीसँग जोडिनु भएन ।
राम्रो छ । राम्रो मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।
यो भन्दा खुशी के होला र ? उज्यालो चाहिनेहरूलाई तर, यो कुरा ओलीको भक्त भन्दा पनि अन्धभक्तहरुलाई मन नपर्ला ।
उमन सिंह गुरुङ
मलाई राम्रो लाग्यो । कुलमान ईमान्दार हुनुहुन्छ ।
हिमाल घिमिरे लक्ष्मी
अब कुलमान घिसिङ फेरि विद्युतको प्रमुख हुनु भनेको आफ्नो नैतिक पतन गर्नु हो । किनकि, उहाँलाई पहिल्यै थमौति दिनुपर्ने हो । यत्रो समयपछि फेरि उही पदमा राख्नु भनेको उहाँको अपमान गर्नु हो । अब उहाँलाई उर्जा मन्त्री बनाएर बिद्युतको प्रमुख उहाँ जस्तै ईमान्दार साहसिक कुनैपनि पार्टीको झोला नबोकेको स्वतन्त्र र त्यही क्षेत्रमा ज्ञान हसिल गरेको मान्छेलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनि गर्ने नै भए अख्तियारको प्रमुखमा प्रेम सञ्जेल लाई पनि नियुक्ति गर्नुनी ।
ठाउँ रिक्त हुनुपर्यो नि । भइरहेकोलाई के गर्ने ? तैपनि, राम्रोलाई स्थापित र नराम्रोलाई विस्थापित गर्ने राम्रो लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राम्रो काम गर्नु भएको छ । यो गिनिज बुक रेकर्डमा जान्छ । धन्यवाद प्रधानमन्त्री ।
राजनीतिक उथलपुथलको बेला कुलमान विद्युत प्राधिकरणमा जानु भनेको अपमान सहनु हो । साँच्चै उनको क्षमतामा दम देखेको छ भने सरकारले भृकुटी कपी उद्योग, रासयनिक मल उत्पादन उद्योग, सरकारी निर्माण सेवा कम्पनीको जिम्मा दिइयोस् ।
घले किङ नौकुण्ड
झन् प्रधानमन्त्री भए कति राम्रो हुन्थ्यो ।
होम जंग शाह
सरकारको काम नै यही हो कहिले फाल्ने कहिले ल्याउने ।
‘चुनौती स्वीकार्दै आएको छु, निराश बनाउँदिन,’ कुलमान घिसिङ « Mero LifeStyle